Howl-gallada Ciidanka Xoogga Dalka & Gabaldhaca Alshabaab!! – Nabad & Nolol
Kooxda Alshabaab oo ah koox ka been sheegtay Diinta Islaamka iskana dhaadhicisay in ay kaligood Muslim yihiin, Soomaalida kalana u haysata dad gaalo ah ama ka ridoobay Diinta Islaamka waxay dalka Soomaaliya lagu arkay markii ugu horaysay sagaashameeyadii.
Waqtigaas waxay ahaayeen in la tirin karo oo gacmaha lagu soo qabqaban karo, haddii loo dhaqaaqo, laakiin awoodooda xoogga leh waxay la soo baxeen, waagii Maxkamadaha 2006dii..
Waxaa xaqiiq ah in ay kooxdaani ay yaambo iyo katarabiil ay ka dhigteen dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan wax la barin iyo dad waawayn oo maangaab ah iyo qaar kale oo nolosha lagu ciririyey.
Hadda waxaa meelo ay ku dhuumaalaystaan oo dalka ka mid ah ka socda Beegsi qurux badan oo aan waxba lagu yeelaynin dadka weli ku hoos nool Alshabaab, taas oo lagu bartilmaan beegsanayo Amiirada iyo horjoogayaasha Kooxdaas, arintaas oo ay fulinayaan Cutubyo ciidamada Geesiyiinta ah ee soomaaliyeed iyo dalalka Saaxiibada la ah oo daqiiqad iyo saacad kasta lagu qaarjinayo xubno sar sare oo qawlaysatada Alshabaab ka tirsan.
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya oo howlgallo ka dhan ah nabadiidka Al-shabaab maanta ka sameeyey deegaanno hoostaga Degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabellada Hoose ayaa waxey ku dileen horjoogayaal Al-shabaab u qaabilsanaa Amniyaadka iyo Sirdoonka.
Saraakiil katirsan ciidanka xoogga dalka oo lahadlay Idaacadda Codka Ciidamada Qalabka sida ayaa sheegay in Horjogayaasha la dilay ay magacyadooda ay kala ahaayeen horjooge Macalin Xuseen oo Nabadiidka Al-shabaab ay u yaqaaneen Sheekh Nuur, una qaabilsanaa Amniyaadka isagoo Horjooge u ahaa koox dilal qorsheysan ka fulisa Muqdisho iyo gobolka shabellaha hoose iyo Sidoo kale howlgalkan waxaa lagu khaarajiyey Farxaan Daahir Xiirane oo isna Al-shabaab u qaabilsanaa sirdoonka, waxaana ay tilmaameen Horjooge Xiirane uu dhowr jeer oo hore dalka Siiriya kaga soo qeyb qaatay dagaalo.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa dhawaan sheegay in Ciidamada Amniga ay toogteen maleeshiyaad hubeysan oo Baabuurta ka dhex toogta dad aan waxba galabsan, isagoo intaa kudaray in la haayo cadaymo muujinaya in maleeshiyadaan ay ka danbeeyeen dilkii Muqdisho loogu gaystay Allaha u naxariistee Maxamed Maxmuud Sheekh oo ka mid ahaa dhalinyarada firfircoon ee magaalada Muqdisho, taas oo ku tusineyso Dadaalka Ciidamada ay ugu jiraan soo afjaridda Kooxdan arxanka daran ee Alshabaab.
Qaar laga soo qabtay iyo qaar kale oo iska soo dhiibay oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay in lagu qalday Diinta islaamka oo aysan aqoon fara badan u lahayn, islamarkaana ay run moodeen, waxaaney intaasi raaciyeen in ay maanta ka shalaayayaan wixii ay Soomaalida kale u gaysteen.
C/rxamaan Xuseen Wardheere oo muddo 12 sano kamid ahaa Alshabab ayaa isna dhawaan sheegay in uu ka baxay kooxda argagaxisada ah ee Alshabaab, isagoo intaa kudaray in aysan qanaaco ku qabin dhalinyarada Wali baaqiga ku ah Alshabaab,waxuuna ugu baaqay in ay ku soo biiraan dowladnimada, kana faa’ideystaan cafiska Madaxweynaha JFS iyo barnaamijka dadkaaga kamid noqo ee wasaaradda amniga.
Waxaa hubaal ah in laynta maanta lagu hayo Alshabaab iyo weerarada isdaba joogga ah oo ay ku hayaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed uu noqon doonaa mid looga adkaado qawlaysatada Alshabaab, isla markaana ay mahadin doonaan soomaalida oo dhami.
Guntii iyo gabagabadii Alshabaab waa la isla gartay in ay yihiin cadaw waxaana qof ahaan u jeedaa in lagu jiro Dhamaadkooda Haddii Alle Yiraahdo.